I-Sam Star-secluded/wifi/hot tub/pool table - I-Airbnb
I-Sam Star-secluded/wifi/hot tub/pool table
I-Sam Star itholakala emigwaqweni egandayiwe yaseSouthern Hills. Iseceleni ngokuphelele 1200 sq ft, 1 1/2 indlu yendlu yamapulangwe emiswe emuva ukusuka emgwaqeni w/ idrayivu ende ejikajikayo eya kuyo. Amadekhi amboziwe ezinhlangothini ezi-2 w/ama-rocker nezindawo zokuhlala ukuze uhlale ubukele inyamazane idlula. Angikwazi ukubona noma yimaphi amanye amagumbi okuhlala kuwo. Indawo yokupaka esezingeni eliphansi ukuletha ama-trailer esikebhe/ATV. Uma udonsa i-trailer ungase ufune ukuza ngamasondo angu-4. I-National Forest ingamamitha ayi-10 kuphela ukusuka endaweni. Indawo yothando kakhulu lapho izivakashi zibuyela ezikhathini futhi futhi.
I-Sam Star ifaka itafula lephuli lasendlini, i-WIFI, ama-TV ahlakaniphile angu-2 anekhebula, isidlali seDVD, iwasha/isomisi futhi ilungele izilwane ezifuywayo.
Indawo yokuhlala ine-smart tv w/ cable & DVD player, isitofu selogi se-ceramic sikagesi, usofa wokulala nesihlalo sothando.
Indlu yokugezela egcwele enesitezi esigcwele w/ usinki, ishawa nendlu yangasese.
Igumbi lokubhukuda lihlanganisa netafula le-pool. Indawo yebha encane enezitulo ezi-2 nama-closets ama-2.
Ikhishi linendawo yokuhamba, indawo kagesi/ihhavini, isiqandisi, umshini wokuwasha izitsha, imicrowave, uMnu. Umenzi wekhofi w/ elinye ikhofi, iKeurig coffee maker w/ 8 k-cups, toaster, crockpot, opener can electric, dinnerware & cookware .
Indawo yokulala ephezulu enombhede wenkosi, i-smart tv w/ cable, i-balcony embozwe itafula le-patio nezihlalo ezi-2 (amafidi ayi-10 ukusuka e-U.S.Forestry) nokuhamba ngekhabethe.
Ixhuma igumbi lokugezela eliyinhloko nosinki, ishawa ne-commode.
Igumbi lokusebenzisa i-washer / isomisi.
Indawo yompheme embozwe eceleni enobhavu oshisayo wangasese netafula/izihlalo.
Umpheme ombozwe ngaphambili w/ 2 izihlalo zerocker.
Izilwane ezifuywayo zinobungani, zilala abantu abangafika kwabangu-4.
Ukuze uthole ireferensi yesikhathi esizayo, sinamanye amakhabethe amahlanu ayikamelo elilodwa kuya kwamathathu.
Izixhumanisi ze-Airbnb zi-
4.94 · 175 okushiwo abanye
I-Beavers Bend State Park yokungena iqhele ngamakhilomitha ayi-2 kuphela. Idamu leBroken Bow Lake liyi-3 1/2 mi kude. Kuningi ongakubona nokukwenza.
Sihlala endaweni yaseSouthern Hills futhi siyatholakala uma sidingeka.